HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MANILLE, any Philippines—Taorian’ny rivo-doza Haiyan, dia nanao ezaka be ny Vavolombelon’i Jehovah mba hanorenana sy hanamboarana trano efa ho 750, tao anatin’ny herintaona latsaka.
Mpiasa an-tsitrapo dimy eo ho eo no mahavita manangana trano iray ao anatin’ny dimy andro.
Hoy i Dean Jacek, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah: “Noeritreretinay hovitaina tamin’ny Septambra 2014 ilay asa. Tamin’ny voalohandohan’ny taona izahay no nanomboka, ary vita tanteraka ilay izy talohan’ny faran’ny volana Aogositra satria be dia be ny mpiasa an-tsitrapo nanampy anay.”
Mpiasa an-tsitrapo teo an-toerana sy avy tany an-tany hafa no namita an’ilay asa.
Nanokana ampahany amin’ny fanomezana omen’ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany ny Filan-kevi-pitantanan’izy ireo, mba hanampiana ny tra-boina. Nanangana komitin’ny vonjy rano vaky ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Manille, mba handaminana an’ilay asa fanorenana any amin’ireo toerana niharan-doza. Tafiditra amin’izany ny fanamboarana sy fanorenana trano 167 any Tacloban, trano 256 any Ormoc, trano 101 any Cebu, ary trano 218 any Roxas. Vavolombelon’i Jehovah no niasa an-tsitrapo nanao an’izany, ka 522 no avy any Philippines, ary 90 no avy any an-tany hafa.
Atoa Ferdinand Romualdez, solontenam-panjakana any Leyte.
Hoy Atoa Ferdinand Romualdez, solontenam-panjakana any Leyte: “Ny Vavolombelon’i Jehovah no anisan’ny fikambanana tsy miankina tonga voalohany nanamboatra trano tamin’iny rivo-doza iny. ... Tsy hitanay izay holazaina fa te hisaotra sy hankasitraka anareo izahay mianakavy sy ny olona eto an-tanàna.”